Bas cusub oo loo maro EGO si loo iibsado 300 | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara300 Baska Cusub ee loo maro EGO
21 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, ego, GUUD, WADADA, HAY'ADAHA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
egoya baska cusub ee wax lagu iibsado
Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn, wuxuu ku dhawaaqay inay iibsanayaan basas cusub 300 EGO. Yavaş wuxuu yidhi way adagtahay in la hirgaliyo nidaam tareeno fudud ama mashruuc metrobus ah awgood awgood.
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa abaabulay “Aqoon-isweydaarsiga Gaadiidka ee Ankara amacıyla si loo sameeyo siyaasadaha gaadiid ee mustaqbalka ee la xiriira gadiidka dadweynaha oo meel muhiim ah ka ah nolosha magaalada.
In kasta oo Agaasinka Guud ee EGO uu soo ururiyey dhammaan daneeyayaasha si loo dhiso tayo tayo sare leh, bay'ad saaxiibtinimo iyo siyaasad gaadiid aragtida ee caasimada, khudbadda furitaanka aqoon isweydaarsiga waxaa sameeyay Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş.
Isagoo carrabka ku adkeeyay inay rabaan inay helaan fikirka qayb walba oo ka socota aqoonyahano ilaa ururro aan dowli ahayn, Madaxweyne Yavaş wuxuu yiri inay rabaan go'aaminta khariiddada cusub ee gaadiidka caasimadda.
Yav Ma garan karo taraafikada qaybta gaadiidka sida ugu badan dolmuş im. Duqa Magaalada Başkan Yavaş ayaa carabka ku adkeeyay sababta caanka ku ah xalinta dhibaatada gaadiidka.
Herkes Qof kasta oo dunida ka mid ah wuxuu arrinta u xalliyaa arrintan si uun. Waan garan karnaa. Waxaan u xallin doonnaa si wada jir ah saynisyahano iyo ururro aan dowli ahayn. Tirada rakaabka ee aan lacag la’aan ku qaadno magaalada Ankara waa 30 maalin kasta khasaarahana waa 630 milyan oo rodol. Waxaan la saxiixnay borotokool duqa magaalada Moscow. Kulankii halkaas ka dhacay, duqa Helsinki wuxuu ii sheegay in nasiib darro aanan ku gudbi karin 85 gaadiidka baaskiilka. Heerkani waa eber boqolkiiba Ankara. Taasi waa sababta aan u bilownay inaan dhisto jidkii baaskiil ee 56 kiiloo mitir. Uma lihin caado inaan ku naqdino maamulladii hore, laakiin gaadiid dad weynaha ayaa lagu dayacay Ankara. 2010, waxaan haysanay 2 kun oo 37 basas ah oo ku xiran EGO. Iyadoo la raacayo Sharciga Magaalada, markii degmooyinka lagu daro, dadweynaha Ankara waxay u dhowaadeen tirada dadka ee 6 milyan. Tirada basaskayaga hadda jira waa kun 540, mid ka mid ahi wuxuu ku socdaa degmooyinka. Sannadka soo socda waxaan iibsan doonaa bas kale oo ah 200 oo leh gaaska dabiiciga ah (CNG) 90. Waxaa jira tareenka magaalada ku xeeran oo mara bartamaha wadnaha ee Ankara oo adeegsanaya 300 kun oo 51 qof maalin walba. Ugu yaraan 600-300 kun oo qof waa inay ka faa'iideystaan ​​adeeggan. ”
Samsuna 11 si aad u iibsato gaadiidka taraamka cusub
Gaadiidka waxaa loo wareejin doonaa goobta cusub ee Park
Ordu Boztepe Kabaha Qadka Baabuurta ee loo Bixiyo Dayactirka
Tareenka Jasiiradda inuu noqdo Dhul hoostiisa ... Gaadiidka ee Sakarya…
Ogeysiiska Qandaraaska: Cunnooyinka Elastomer ee la iibsaday (TÜLOMSAŞ)
Mashruuca Ankara Metrobus
Tirada basaska EGO